You are here: Home somal Kulankii Ciyaareed ee Kooxda Jigjiga Yar iyo Kooxda Borama
Qaybtii hore ee ciyarta waxaa hal (1) la yimid Kooxda Jigjiga yar oo goolkaasi shabaga ku hubsaday Idiris (Yahadhi).qaybtii hore ee ciyaartu waxay ku soo gabogabowday 1 iyo 0. Halka kooxda Boorama aysan waxba lamay iman.
Hlafkii danbe ayaa la isku soo laabtay iyada oo koox waliba la soo tashatay Tababarahoodii koox walibana ugu talo galeen in ay halkaas guusha kala hoydaan. Kooxda Borama ay aad isku soo canaanatay oo ay ku dadaalayeen in ay iska caabiyaan Kooxda dhigooda ah.
Cabaar markii ay ciyaatu socotay ayaa waxa kooxda Boorama heshay rigoore kaas oo ay gacan kaga dhacday goobta digniinta dhexdaada difaaca Kooxda Jijgjiga yar Mr Nasir Dusiye.Balse kooxda borama kama aysan faa;iidaysan Rigoorahaas ay heleen wayna iska lumiyeen waxaana rigoorahaas ka qabtay Mr Guuleed ah Goolhayihii Xulka qaran ee Hargeisa. Waa gool haye aad u cajaa;ib ah
Kooxda Jigjiga yar ayaa waxa ay heshay fursad labaad taasi oo isla ciyaartoydii hore ee goolka hore u dhaliyay waa (Yahadhi) uu u labeeyay kooxdiisa waxayna halkaas guushu ku raacday kooxda Jijjiga yar jalka ay Kooxda Borama ay guul daro kala hoyatay ciyaartaas manta dhacday.
Sidaasna waxa kooxda jigjiga yar ku yeelatay 6 dhiibcood waana ciyaartoodii labaad ee ay badiyaan.